နှစ်ခါပြန်ကြည့်ချင်လောက်အောင် ဆက်ဆီကျနေတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာ ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို – Shwe Yoe
အမြဲတမ်း အဆန်းတွေကို လုပ်တတ်တဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ ဒီတစ်ခါ မှာလည်း အမိုက်စားလေး လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီ နော်.. ပရိ သတ်ကြီး.Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက်လည်း ပတ်ထရစ်ရှာရဲ့ အမိုက်စား Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပြန်လည်မျှ ဝေပေးလိုက် ပါတယ်နော်. ။အရုပ်မလေးတစ်ရုပ်လို လှပတဲ့ ကပြားမင်းသမီး ပတ်ထရစ်ရှာကို တော့ Cele Connections ပရိသတ် ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်.
ပတ်ထရစ်ရှာကတော့ အနုပညာလောကထဲကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် တည်းက ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး မော်ဒယ်ဘဝကနေ စတင်ကာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို စတင်ခဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်“မကြွေပါနဲ့ ဆာကူရာ” ဇာတ် ကားကနေ စတင်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ သတိထားမှုတွေကို ရရှိကာ အားပေးမှုတွေကို ရရှိခဲ့သူပါ.။
ကပြားမ လေးတစ်ယောက်မို့လို မြန်မာရုပ်ထက် နိုင်ငံခြားသူတစ်ယောက် တစ်လို လှပကာ အရုပ်မလေးလို အလှတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ် .။ပတ်ထရစ်ရှာက ခပ်ဆန်းဆန်း Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတွေကို ဆော့ရတာကို နှစ်သက်ပြီး သူမဆော့ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး တွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိသူပါ.။
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်းအလှ တွေ ထင်ရှား ပေါ်လွင်နေတဲ့ အကိတ်မလေး အိချောပို ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ
ဂါဝန်တိုလေး နဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ပေးလာတဲ့ ရွှေပိုးအိမ်